Qorshayaasha Xagaaga? Fiiri Tacaburka Hore, Naadiga Tacaburka ama Aasaaska | maqaalka
Haddii aad raadineyso siyaabo aad mashquul ugu noqon karto ardaygaaga xagaagan, hubi barnaamijyada wanaagsan ee laga heli karo Waxbarashada Bulshada! Faahfaahin dheeri ah ka eeg waraaqaha xaashiyaha ee 'flyers' hoose, oo ay ku jiraan diiwaangelinta iyo ujrooyinka barnaamijka.
Naadiga Tacaburka - fasalka K-5
Naadiga Adventure waa Barnaamijka Daryeelka Carruurta ee Da'da Dugsiga ee Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Waxa jira dhawr meelood oo ku habboon dugsiyada degmada ee loogu talagalay ardayda galaya Dugsiga barbaarinta illaa fasalka shanaad. Saacadaha waa 6:30 am-6 pm.
Naadiga 'Adventure Club' waxaa ka shaqeeya aqoonyahanno tababbaran oo leh waxbarasho iyo khibrad isku dhafan oo si gaar ah ugu habboon la shaqeynta carruurta da'da iskuulka ah. Iyada oo manhaj loogu talagalay in lagu xoojiyo barashada, ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay doortaan, ku celceliyaan xirfadaha go'aan qaadashada iyo dhisida xiriiro asaag wanaagsan.
Qeybta hoose - fasalka 6-8
Qeybta hoose waxaa si gaar ah loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga dhexe markay weynaadaan oo ay noqdaan dhalinyaro masuul ah. Feejignaan ayaa la siiyaa baahiyaha dhalinyarada iyo da'yarta kahor, mararka qaarkoodna da 'kala duwan ayaa yeelan kara xuduudo kala duwan marka loo eego
kormeerka. Waxaan ku dhiirrigelinaynaa ardayda inay noqdaan kuwa madax-bannaan, laakiin waxaan siinnaa taageero xagga nabadgelyada iyo waxbarashada ah.